बढी भाडा लिनेलाई यात्रु बनेर कारवाही गर्दै ट्राफिक प्रहरी, पाँच जना पक्राउ
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाड पर्व लक्षित विशेष अभियान शुरु गरेको छ। सोही अभियानअन्तर्गत आज चाडपर्वको मौका छोपेर काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाने यात्रुसँग मौकाको फाइदा उठाई बढी भाडा टिकट काट्ने पाँच जनालाई कारवाही गरिएको छ।
दशैं आइसक्यो, लामो र मध्यम दूरीका यातायातको टिकट बुकिङ अन्योलमै
यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुको चापको अवस्थालाई हेर्दा अग्रिम टिकट बुकिङको आवश्यक्ता नै नपर्ने देखिएको बताएको छ। विभागका निर्देशक डा. लोकनाथ भुसालले अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुगिने बताए।
ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारलाई समितिको निर्देशन
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ (भूमिस्थ प्रवन्ध) सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्देशन दिएको छ। १८ असोजमा बसेको समितिको बैठकले ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ मा समय सापेक्ष अद्यावधिक एवं संशोधन गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट भूमिस्थ प्रवन्ध सम्बन्धी निर्णय गर्न’ निर्देशन दिएको हो।
टुरिस्ट बसको सबै टिकट अब अनलाइनबाटै, दशै‌‌लाई प्रविधिमार्फत घरबाटै सेवा लिन पाइने टुरिष्ट बसको सबै टिकट अब अनलाइनबाटै लिन सकिने भएको छ। नेपालमा नै पहिलो पटक टुरिष्ट यातायात व्यवसायीहरूले अनलाइन सिस्टमबाट पर्यटक सार्वजनिक यातायात सेवाको टिकट उपलब्ध गराउने गरी अनलाइन बिक्री गर्न सम्झौता गरेका छन्।
६ महीनापछि अनुमति पाउँदा पनि उडेन सौर्य एअरलाइन्स कोभिड-१९ का कारण थलिएका वायुसेवा सरकारले अनुमति नदिँदासम्म कहिले उडान गर्ने भनेर हतारिए। सरकारले अनुमति दिएपछि प्राय: सबै कम्पनीले उडान थालेपनि सौर्य एअरले भने भएकै जहाज तयार गर्न सकेन। १० दिन उडान गरेको सिम्रिक एअरले पनि अर्को १० दिनलाई जहाज ग्राउन्डेड गर्दा आन्तरिक वायुसेवामा दुईवटा कम्पनीको उडान अहिले ठप्प छ।
थाइ एअर र एअर इण्डियाको ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’को अनुमति फिर्ता लिइँदै नेपाल नागरिक उड्‌डयन प्राधिकरणले थाइ एअर र एअर इण्डियालाई दिएको ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’को अनुमति फिर्ता लिने भएको छ। सरकारले हिमालय एअरलाइन्सलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मेवारी दिएको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला प्राधिकरणले थाइ र एअर इण्डियालाई दिएको अनुमति पनि फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।
कोभिडपछि नेपालका निजी वायुसेवाको मासिक रू. ४ अर्ब आम्दानी गुम्यो कोभिड-१९ कारण नेपालको हवाई क्षेत्रले मात्रै मासिक रू. ४ अर्ब गुमाएको छ भने विश्वकै हवाई यातायात कोभिड अगाडिको सामान्य अवस्थामा फर्कन चार वर्ष लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्‌डयन संगठन (आइकाओ)को अनुमान छ।
हवाई उड्‌डयन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कंदै, दैनिक हुनथाले १५० उडान गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय उडान दैनिक १३ देखि १५ वटा र आन्तरिक उडान ७५ वटासम्मलाई स्वीकृति दिएसँगै अब विमानस्थलमा हुने उडान तथा अवतरणको गतिविधि दैनिक १५० वटा भन्दा बढी हुन पुगेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणसँगै भीडभाड बढेपछि सवारी सञ्चालनमा कडिकडाउ कोभिड-१९ को जोखिमकाबीच काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी तथा मानवीय चाप बढ्न थालेको छ। सवारीसाधान झण्डै साविकको तुलनामा बढी सञ्चालन हुन थालेको छ भने ट्राफिक जामसमेत बढ्न थालेको पाइएको छ।
सवारी चाप बढेपछि जोर–बिजोर प्रणालीमा कडाइ सडकमा सवारी चाप बढेपछि काठमाडौं उपत्यकामा जोर–बिजोर प्रणालीमा कडाइ गरिएको छ। जोर–बिजोर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जाँचमा कडाइ गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।
सोमबार त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै १२५९ जना नेपाल भित्रिए विभिन्न देशबाट उद्धार तथा नियमित उडानमार्फत सोमबार १२५९ जना नेपाल भित्रिएका छन्। त्रिभुव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहुँदै ४ विदेशीसहित ११ वटा उडानमार्फत १२५५ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका हुन्। यससँगै ३ वटा शव पनि नेपाल ल्याइएको छ।
हिमालयकाे ‘सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ अनुमति खारेज गर्न नेवानि कर्मचारीको माग हिमालयलाई अहिले ‘सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’को रूपमा समावेश गराउने र फागुन २०७७ मा व्यवसायिक ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नै दिएर नेवानिको अस्तित्व संकटमा पार्ने षडयन्त्र भइरहेको नेवानि कर्मचारी बताउँछन्।
निगमको भाग खोसेर हिमालय एअरलाइन्सलाई दिइयो ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ को अनुमति, निगमलाई वार्षिक एक अर्ब घाटा सरकारले निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी हिमालय एअरलाइन्सलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ को अनुमति दिएको छ। जसका कारण हिमालयबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ वापत नेपाल वायुसेवा निगमले पाउँदै आएको वार्षिक रु.१ अर्ब गुमाउने भएको छ।
१८० दिनपछि शुरू भयो आन्तरिक उडान बन्दाबन्दीका कारण बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान १८० दिनपछि सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। नेपालमा सेवा दिइरहेका विभिन्न ९ वटा कम्पनीमध्ये ८ वटाले सोमबारदेखि उडान शुरू गरेका छन्।
सार्वजनिक यातायात: ‘न स्यानिटाइजर न दूरी, भाडा मात्र बढी’ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहँदा खुलेका सार्वजनिक यातायातमा आवतजावत जोखिमपूर्ण बनेको छ। यस्ता साधनमा स्यानिटाइजर नराखिँदा तथा दूरी कायम नगरिँदा जोखिम बढेको देखिएको छ, तर सवारी साधनमा भाडा भने बढेको छ।
नेपालले भारतसँग किनेका दुईवटा रेल शुक्रबार दिउँसो नेपाल आइपुगेका छन्। भारतको जयनगरबाट छुटेका रेल जनकपुर आइपुगेका हुन्। नेपाल आइपुगेका दुवै रेल ५/५ डिब्बाका हुन्। एउटा रेलमा एकैपटक १३०० जनाले यात्रा गर्न सक्छन्।
टाटाको अल्ट्रोज प्रिमियम ह्याचब्याक नेपाली बजारमा
टाटा मोटर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्गले टाटा अल्ट्रोज प्रिमियम ह्याचब्याक नेपाली बजारमा ल्याएको छ । टाटाले डिजिटल प्रबिधिबाट सार्वजनिक गरेको यो सावरी साधन १ असोजदेखि नेपाली बजारमा आएको छ ।
६ महीनापछि सञ्चालनमा आए लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात
कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिमका कारण करीब ६ महीनादेखि बन्द लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। त्यससँगै काठमाडौंको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा आजदेखि चलपहल शुरू भएको छ।
पहिरोले अवरुद्ध नारायणगढ-मुग्लिन सडक सञ्चालनमा आयो पहिरो खसेपछि गएरातिदेखि अवरुद्ध बनेको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको छ। दिउँसो ३ बजेदेखि सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडक १६ घण्टादेखि अवरुद्ध पहिरो खसेपछि गएरातिदेखि अवरुद्ध बनेको नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। ठाउँ ठाउँमा खसेको पहिरो पन्छाउन समय लाग्दा सडक १६ घण्टादेखि अवरुद्ध छ।
हिमालय एअरलाइन्सलाई आईएसओ मान्यता आईएसओ ९००१–२०१५ प्रमाणीकरणले एअरलाइन्सको सम्पूर्ण अपरेसन क्षेत्रमा उच्चतम मापदण्ड कायम गर्दै वायुयान मर्मत तथा इञ्जिनियरिङ सेवा प्रदान गर्न सक्ने दक्षता पुष्टि गर्ने हिमालय एअरलाइन्सले जनाएको छ।
१५ असोजदेखि आन्तरिक उडान खोल्ने सरकारको तयारी, विदेशबाट आउने हवाई यात्रुको सीमा ३ हजार पुर्‍याइने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आउँदो १५ असोजदेखि आन्तरिक उडान खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। मन्त्री भट्टराईले विदेशबाट चार्टर्ड तथा नियमित उडान गरेर आउने हवाई यात्रुको सीमा २५ सयदेखि तीन हजार जनासम्म पुर्‍याउने तयारी भइरहेको पनि बताए।
शुक्रबार हवाई उडानबाट ६५१ नेपाली भित्रिए, ४ जना मात्रै बाहिरिए शुक्रबार ६५१ जना यात्रु स्वादेश भित्रिए भने ४ जना यात्रु बाहिरिएका छन् । विमानस्थल कार्यालयले शुक्रबार साँझ ५ बजे सार्वजनिक गरेको उडान अवतरण तालिका अनुसार ७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ४ वटा वायुसेवाले यात्रु सेवा दिएका छन्।
पहिलो दिनको नियमित उडानबाट ४९७ जना स्वदेश भित्रिए पहिलो दिनको नियमित उडानबाट ४९७ जना स्वदेश भित्रिएका छन्। बुधबारबाट शुरू भएको नियमित उडानमा नेपाल एअरलाइन्सले जापानबाट १२० जना, हिमालय एअरलाइन्सले माल्दिभ्सको मालेबाट १३६ जना र मालिन्दो एअरले मलेसियाको क्वालालम्पुुरबाट १३३ जना यात्रुलाई नेपाल भित्र्याएको हो।
नेवानिले सार्वजनिक गर्‍यो नियमित उडानको भाडादर, कुन गन्तव्यमा कति ? वायुसेवा निगमले नियमित व्यवासिक उडान गर्ने अनुमति पाएको युएई, मलेसिया, हङकङ र जापान गन्तव्यको उडानमा लाग्ने भाडादर तय गरेर सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो भाडादरमा सबैभन्दा महंगो भने जापानको लागि एकतर्फी भाडादर नै रु.८४१७० रहेको छ ।
अब विदेशी एअरलाइन्सले नेपाली वायुसेवासरह भाडा मात्र लिन पाउने सरकारले आजदेखि नियमित उडान शुरू गरेका विदेशी वायुसेवाहरूलाई नेपाली वायुसेवा सरह मात्रै हवाइ भाडा लिन निर्देशन दिएको छ। अबदेखि विदेशी एअरलाइन्सले पनि नेपाली वायुसेवाहरू हिमालय र नेपाल वायुसेवा निगम सरह मात्रै हवाइ भाडा लिन पाउनेछन्।
सोमबार फर्किए ५४२ नेपाली, अब नियमित र चार्टर्ड उडानबाट दैनिक ८०० जना आउन पाउने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जारी गरेको उडान तालिका अनुसार सोमबार हिमालय एअरलाइन्सले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को अबुधाबीबाट १५५, नेपाल एअरलाइन्सले युएईकै दुबईबाट २५४ जना र एयर अरेबियाले दुबईकै सारजाहबाट १४२ यात्रु लिएर काठमाडौं आएका छन् ।
नेवानिको नियमितमा १७ र चार्टर्डमा ११ उडान हुँदै, कुन दिन कहाँ (सूचीसहित) राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले १७ भदौदेखि हुने एक महीनाको नियमित र चार्टर्ड उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ। निगमले नियमित उडानमा १७ भदौदेखि १४ असोजसम्मका लागि उडान तालिका तय गरेर सार्वजनिक गरेको हो।